ဘရိတ် | October 2021
အဓိက > ဘရိတ်
shimano ဘရိတ်မှုတ်ဖို့ဘယ်လို - တာရှည်ခံဖြေရှင်းချက်
Shimano ဘရိတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုသွေးထွက်သလဲ။ Shimano Disc Brakes ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတာနောက်ဘက်ဘီးကိုဖယ်ရှားပါ။ ဘရိတ် pads ဖယ်ရှားပါ။ cotter pin or bolt ကိုသုံးပြီး Bleed Block ကို Install လုပ်ပါ။ ဘရိတ်လီဗာကိုညီမျှအောင်ညှိပါ။ 2.5mm mm allen wrench ဖြင့်သွေးထွက်သည့်သင့်လျှော်သောဝက်အူကိုဖယ်ရှားပါ။ Shimano ဘရိတ်သွေးထွက်သည့်သွေးကြောထဲ၌ Thread ကိုထည့်ပြီး planung ကိုထားပါ။
ခရီး disc ကိုဘရိတ်
ခရီးစဉ် disc ဘရိတ် - ဘယ်လိုအောင်မြင်ရန်
Trek စက်ဘီးများတွင် disc ဘရိတ်ရှိပါသလား ရိုးရာအနားကွပ်ဘရိတ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် Trek စက်ဘီးများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ သို့သော်ယနေ့ Trek လမ်းပလက်ဖောင်းတိုင်း၌လည်း disc brake options ရှိသည်။ လမ်းဘေးစက်ဘီးပေါ်မှдисဘရိတ်များသည်လမ်းမြင်းစီးသူရဲကောင်းများ၊
Shimano 105 disc ကိုဘရိတ်
Shimano 105 disc brakes - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Shimano 105 တွင် disc ဘရိတ်ရှိပါသလား။ Shimano ၁၀၅ အတွက်အကြီးမားဆုံးသတင်းမှာ Shimano ၏ ဦး ဆောင် disc-specific features များနှင့်စီးရီး lineup တွင်ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်များတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်သော Flat-BR BR-R7070 calipers သည် (140mm အရွယ်အသစ်အပါအ ၀ င်) ICE TECHNOLOGIES pads နှင့် SM-RT70 rotors များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Trp ကာဗွန်ဘရိတ် - လက်တွေ့ဖြေရှင်းချက်
TRP ဘရိတ်ဟာကောင်းသလား။ TRP ကို ​​SRAM နှင့် Shimano တို့တွင်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ TRP Quadiem ဘရိတ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမော်ဂျူလ်နှင့်စွမ်းအားကိုရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသော၊
တိုက်ရိုက်ဘရိတ်ဘရိတ်ကို Sram - ပြproblemsနာများ၏ဖြေရှင်းချက်
တိုက်ရိုက်ဘရိတ်ဘရိတ်ပိုကောင်းပါသလား Direct-mount calipers များသည် standard-bolt ဘရိတ်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအစား mounting point နှစ်ခုကြားတွင်သူတို့ကကွေးညွှတ်နိုင်မှုနည်းပါးသဖြင့် lever ရှိသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အလဟ is ဖြစ်သွားသည်။ သူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောအနေအထားကြောင့်သူတို့သည်လည်းကောင်းမွန်သောတာယာရှင်းလင်းမှုကိုပေးသည်။
အမွေးအိတ်ဘရိတ် - ကြာရှည်ခံဖြေရှင်းချက်
ဘရိတ်အုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ လေ့ကျင့်ခြင်း feathering, ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောင်းလဲဖိအားများနှင့်ဘရိတ်၏လွှတ်ပေးရန်၏ technique ကို; သင်၏မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နေစဉ်ဘရိတ်သည်သော့ခတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
shimano r785 ဟိုက်ဒရောလစ် disc ကိုဘရိတ်
Shimano r785 ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ် - ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ
Shimano r785 disc ဘရိတ်ကိုသင်ဘယ်လိုသွေးစွန်းသလဲ။ နို့သီးခေါင်းဖုန်မှုန့်အဖုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ၊ လေကိုတတ်နိုင်သမျှများများထုတ်ယူပါ၊ ရေပိုက်ကိုနို့သီးခေါင်းနှင့်ချိတ်။ နေရာတွင်သော့ခတ်ပါ။ ယခုသင်သည် heed key (သို့) box spanner ကို သုံး၍ bleed port ကိုဖွင့်ရန်၊ သငျသညျယခုသွေးထွက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ ။18 2016 ။
uci disc ကိုဘရိတ်
Uci disc brakes - ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
disc brakes UCI သည်တရားဝင်လား။ UCI ကဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်နှစ်နှင့်ချီသောကိုက်ညီမှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများအရခွင့်ပြုခြင်း၊ ခေတ္တပိတ်ပင်ခြင်းခံရပြီးနောက် disc brakes ကိုလမ်းပေါ်နှင့် (BMX) ပြိုင်ပွဲများတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ တစ်ဖန်အတည်ပြုခဲ့သည် 22 ။ 2018 ။
အေးသောရာသီဥတုတွင်အလုပ်မလုပ်သောဘရိတ် - ပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
အေးတဲ့အခါမှာငါဘရိတ်တွေဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်တာလဲ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည်မြှင့်တင်ရေးမြှေးနှေးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အဆို့ရှင်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ဘရိတ်နင်းအားဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရာသီဥတုအေး။ မောင်း။ ကားဂိုဒေါင်ထဲ၌ညအိပ်ထားသည့်ယာဉ်များသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများခံစားရနိုင်သည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာကားမောင်းမီအင်ဂျင်ကိုနွေးစေခြင်းဖြစ်သည်။
avid hydrolic ဘရိတ်
Avid ဘရိတ်ဘရိတ် - ဘုံမေးခွန်းများကို
Avid ဘရိတ်ကောင်းလား နောက်ဆုံးစီရင်ချက် - ငါဒီဘရိတ်ကိုငါ့မြှားတောင့်ရှိမည်သည့်စက်ဘီးတွင်မဆို run လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်တစ်နေ့လုံးစွန့်စားခန်းတစ်ခုလုံးအတွက်အလင်းအလုံအလောက်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကသင်၏ဘောင်များထက်သင် ပို၍ မီးရှို့သည်အထိ Whistler ရှိအနိမ့်အမြှောက်များသို့လှည့်ပတ်သွားရန်လုံလောက်သော burly ဖြစ်သည်။ ကြီးစွာသောမော်ဂျူလ်, ergonomics နှင့်ဗေဒစံလာကြ၏။
Magura လမ်းဘရိတ် - ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
Magura ဟာဂျာမန်လူမျိုးလား Magura ဟုလူသိများသော KG သည် ၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bad Urach အခြေစိုက်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ဘီးရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ဘရိတ်၊ နေကာမျက်မှန်၊ သံခမောက်လုံး၊ အိတ်များ၊
ultegra ဟိုက်ဒရောလစ် disc ကိုဘရိတ်
Ultegra ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ် - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
Shimano Ultegra disc ဘရိတ်သည်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြစ်ပါသလား။ SHIMANO ULTEGRA ဟိုက်ဒရောလစ် Disc ဘရိတ်နောက်ဘက်ခြေနင်း။
deore XT ဘရိတ်
Deore XT ဘရိတ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Deore XT ဘရိတ်ကောင်းလား။ ယေဘုယျအား။ နောက်ဆုံးပေါ် Shimano XT ဘရိတ်သည်လမ်းကြောင်းမြင်းစီးသူရဲအများစုကိုကျေနပ်သင့်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်အပြင်လွယ်ကူသောတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဖြင့် XT ဘရိတ်များသည်အနိုင်ရသူများဖြစ်သည်။
Code ဘရိတ် - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေကို
SRAM Code R ဘရိတ်ကောင်းပါသလား။ SRAM Code R သည်အင်အားကြီးလမ်းကြောင်း / enduro ဘရိတ်ဖြစ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုအချို့၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများမပါဘဲကြီးစွာသောမော်ဂျူးနှင့်ကောင်းမွန်သော pad သက်တမ်းကိုပေးစွမ်းသည်။ 2018 ။
Sram အဆင့်ဘရိတ် - ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေ
SRAM အဆင့်ဘရိတ်သည်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြစ်ပါသလား။ အဆိုပါလမ်းညွှန်စိတ်ကူးဟိုက်ဒရောလစ် disc ကိုဘရိတ်ဖြစ်၏ စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ piston ၂ ခုပါသော cross-country အသစ်နှင့် light လမ်းကြောင်းအာရုံစိုက် Level Brake များဖြင့် SRAM သည် TaperBore မတိုင်မီရှိရာသို့ပြန်သွားသည်။ ၎င်း၏ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်အများစုသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသော port များကိုတစ်ဖန်ပြန်သုံးသပ်သည်။
shimano ဘရိတ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
disk ဘရိတ်ကိုရှင်းလင်းနည်း - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေ
disc ဘရိတ်ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းနိုင်လဲ။ “ disc brakes ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဆပ်ပြာနဲ့ရေအနည်းငယ်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ်။ ဤသည် pads နှင့်ရဟတ်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီသည်။ ဘရိတ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အခြားရေမှုန်ရေမွှားမလိုအပ်ဘဲ။ ဘရိတ်များကိုသန့်ရှင်းစေရန် compressed spray များကိုမသုံးပါနှင့်။ ဤအချက်ကတံဆိပျ swell.22.06.2019
အသွားအပြန်စက်ဘီး disc ကိုဘရိတ်
ခရီးသွားစက်ဘီး disc ကိုဘရိတ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ဘယ်စက်ဘီးကိုအသွားအပြန်အတွက်အကောင်းဆုံးလဲ? အကောင်းဆုံးဟိုက်ဘရစ်ခရီးဆောင်စက်ဘီးများ။ အများပြည်သူသုံးစက်ဘီးစီးခြင်း V7 ခုနစ်မြန်နှုန်းစီးစက်ဘီး။ $ 600 ။ Brooklyn စက်ဘီး Co. , Franklin 3. Linus Dutchi 1 စက်ဘီး။ $ 459 Linus Roadster အားကစား။ $ 679 Brompton M6L ခေါက်စက်ဘီး။ $ 1,590 Dahon D8 ကိုလွှတ်တင် $ 979 Tern Link C8 ခေါက်စက်ဘီး။ $ 849 ။ iantရာအမြန်အမြန်ခေါက်စက်ဘီး။ $ 660 ။
တိုက်ရိုက်ဘရိတ်ဘရိတ် - ကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
တိုက်ရိုက်တောင်ဘရိတ်ကဘာတွေလဲ။ Direct Mount ဘရိတ်သည်အခြေခံအားဖြင့်နိမ့်ကျသော၊ ဆွဲအားခံနိုင်ရည်ရှိသောဘရိတ်များဖြစ်ပြီးစက်ဘီးဘောင်နှင့်ချိတ်ဆွဲစင်နှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်တိကျသောဘောင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ချိတ်များမှတဆင့်ချိတ်ဆွဲထားသဖြင့်လမ်းဘေးစက်ဘီးအများစုသည် Direct Mount calipers ကိုမသုံးနိုင်ကြပါ။ 11.08.2015